Wednesday January 19, 2022 - 17:34:23
Wararka ka imaanaya wadanka Kenya ayaa sheegaya in meydadka in kabadan 20 ruux laga helay Webi mara Ismaamulka Siaya oo dhaca Jihada Koofur Galbeed ee wadankaasi.
Ugu yaraan 21 ruux ayaa la xaqiijiyey in meydadkooda la helay iyagoo dul sabeynaya biyaha Webi lagu magacaabo Yala kuwaas oo qaarkood inta la dilay lagu riday Jawaanno kadibna biyaha lagu tuuray, sida ay sheegeen dad kaluumeysata ah oo ku nool hareeraha webiga meydadka laga helay.
Hay'adaha Sheegta in ay u doodaan Xuquuqul insaanka ee ka howlgala gudaha Kenya ayaa qeyla dhaan ka muujiyey dhacdadan iyagoo tilmaamay in dadkan ay yihiin dhibanayaal dilalka sharci darada ah ee ciidamada Ammaanka Dowladda Kenya ay ka fuliyaan gudaha wadankaasi.
Hay'ad lagu magacaabo Haki Afrika ayaa sheegtay in meydadka 21 rag ah oo aan la aqoonsan ay ka heleen goobta meydadka lagu keydiyo ee Isbitaal ku yaala Ismaamulka Siaya kuwaas oo qaarkood inta la jar jaray Jawaano lagu riday.
"Arrinta Yaabka leh oo aad looga naxo ayaa ah in meydadkan ay Webiga ku daadiyeen dad aan ilaa hadda la garanayn" ayuu yiri xuseen Khalid oo ah agaasimaha Hayadaasi.
ilo Maxalli ah ayaa Warbaahinta u sheegay in laga soo bilaabo bishii July ee sanadkii tagay Webigan laga soo saaray Meydadka wax badan 20 ruux kuwaas oo inta si naxariis darra ah loo dilay Webiga lagu daadiyey.
Dadka deegaanka ayaa dhacdadan ku tilmaamay mid argagax leh iyagoo sheegay in todobaadyadii lasoo dhaafay meydadkan si joogta ah looga helay Webiga islamar ahaantaana ay tahay Qatar soo wajahday.
Boqorka Sacuudiga oo markale loola cararay Isbitaal kuyaal magaalada Jidda.